Barreessaa LibreOffice kessatti, barruu - saxaatoo, gabateewwan, fi dirreewwan, akka BarruuUfmaatti of keessaa qabutti kuusuu, kunis, booda barruu hatataaman saaguu nidandeessa. Yoo barbaaddees, barruu dhangeefame kuusuu nidandeessa.
Galfata Maalima BarruuUfmaa Uumuu
Barruu, barruu saxaatoo waliin, gabatee, fi dirree akka galfata BarruuUfmaatti akka olkaa'u barbaaddu filadhu. Saxxaatoon kan kuusamuu, yoo akka arfiitti korkoddeefame, akkasumas yoo xinnaate arfii barruu tokkoon durfame fi itti aanameedha.
Akaakuu, bakka itti BarruuUfmaa kuusuudhaaf barbaaddu fili.
Maqaa arfiilee afur ol dheerattu barreessi. Kunis dirqalaa BarruuUfmaa Yeroo barreestu maqaa hafee yaadni dhiyaatu akka agarsiisuu siif hayyama. Yoo barbaadde, qaxxaamura ka'umsaa fooyyessuu nidandessa.
Qabduu BarruuUfmaa cuqaasi, booda Haaraa fili.
Qabduu Cufi cuqaasi
Galfata Maalima Barruu Ufmaa Saaguu
Galfata Baruu Ufmaa galmmetti iddoo saagu barbaaduu cuqaasi
BarruuUfmaa - Gulaali Fili.
BarruuUfmaa saagu barbaadu filadhu, sana booda Saagi cuqaasi.
Galfata BarruuUfmaaf qaxxaamura barreessu nidandessa, booda F3 cuqaasi, yookan Kabala Barruu Ufmaa sajoo irratti Sagii>, xiyya ittiaanutti cuqaasi.
Hatataaman LibreOffice foormulaa herrega galchuuf, fn barreessitee booda F3 cuqaasi. Yoo foormulaa tokko chala saagde, foormulaan tartiiban lakkaawwaa. barruu akkessa saaguuf, dt barreessitee booda F3 cuqaasi
Tarree Galfata BarruuUfmaa Maxxansuuf
Meeshaalee - Maakroota - Maakroota Qindeessi - LibreOffice Basic Fili.
BarruuUfmaa irra Ijaarsi Cimdaa fayyadamuun
Cimdaa irratti galeeloo garagaratti BarruuUfmaa Olkaa'u nidandessa
Fakkeenyaaf, galfata Barrruu Ufmaa "Dubbisuu-qofa" taa'an cimdaa wiitta'aa Kuubbaaniyaaf, BarruuUfmaa galeeloo qe'ee hiika fayyadamaa Olkaa'u nidandessa.
Xurreelee galeeloo BarruuUfmaa yeeroo qindaa'ina gulaalaamu nidandda
Bakka kanatti galeeloo lamattu tarreefame.Galfata tokkoffaa ijaarsa cimdaa irratti, galfata lammaffaa galeeloo fayyadamaa irratti. Yoo galfata BarruuUfmaa lama maqaa walfakiin galeeloo lamaanu'u kessatti jirattani, galfatan galeeloo fayyadamaa fayyadaman
BarruuUfmaa - Gulaalli
Title is: BarruuUfmaa Fayyadamuu